तपाइको यो साता कति शुभः ? हेर्नुहोस् बैशाख २५ गते देखी बैशाख ३१ गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफल - Mitho Khabar
May 7, 2022 mithokhabarLeaveaComment on तपाइको यो साता कति शुभः ? हेर्नुहोस् बैशाख २५ गते देखी बैशाख ३१ गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफल
२०७८ बैशाख २५ गते देखी बैशाख ३१ गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफल (ज्यो.प.सरोज घिमिरे)
बृश्चिक राशि (तो, ना, नि, नु, ने, नो, या, यि, यु) साताको प्रारम्भमा सामाजीक कार्यमा जुट्ने उत्तमसमय रहकोछ । रोकिएर रहेका कार्यहरु सम्पादन गर्न बिषेश समय रहेकोछ । मान्यजनहरुको साथ सहयोग प्राप्त रहनेछ ।स्थीर क्षेत्रमा लगाइएको लगानिको दिर्घ कालिन फाईदा प्राप्त रहनेछ । महत्वपूर्ण जिम्बेवारी हात लाग्ने समय रहेकोछ । सभासम्मेलन जन्यकार्यमा सहभागीताको योग रहेकोछ । मान्यजनहरुको साथ सहयोगमा नयाँ कार्यको थालनिको निम्ती उत्तम समय सभासम्मेलन जन्यकार्यमा सहभागीताको योग रहेकोछ । मान्यजनहरुको साथ सहयोगमा नयाँ कार्यको थालनिको निम्ती उत्तम समय रहनेछ । कार्य क्षेत्रमा लगाईएको लगनसीलताको राम्रो कदर हुनेछ । अध्यन अध्यापनका क्षेत्रमा खर्चिएको समय मध्यम रहनेछ । आम्दानिका बिभिन्न श्रोतहरु फेला परेतापनि कार्य क्षेत्रमा एक्लोपनको अनुभब रहनेछ । साताको अन्त्यमा अनावश्यक खर्चको सम्भाबना रहनेछ । परीबारका सदस्यहरुबाट टाढाँ भएको महसुस रहनेछ । बिश्वासिला ब्यत्तिहरुबाटँ धोका हुन सक्ने सम्भाबना रहेकोले साबधानि रहनु होला ।
मेयर बने लगत्तै काठमाडौँको फोहोरको व्यबस्थापनमा चासो देखाए बालेनले, फोहोर फाल्ने ठाएँ खोज्दै पुगे नुवाकोट
निहारिका र उनको छोरालाई ‘एडप्ट’ गर्न चाहन्छु : करिश्मा मानन्धर